Puntland oo toogasho ku fulisay 21 xubnood oo Al-Shabaab ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo toogasho ku fulisay 21 xubnood oo Al-Shabaab ah
June 27, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Xubnaha la toogtay oo maxkamada ka muuqanaya. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ayaa maanta oo Axad ah dil toogasho ah ku fulisay 21 xubnood oo Al-Shabaab ah kuwaasoo lagu helay dilal ka dhacay Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo.
18 kamid ah ayaa lagu toogtay Gaalkacyo, labbona Garoowe, halka mid kale lagu toogtay Qardho, sida ilo-wareedyo katirsan ciidamada ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Xubha Al-Shabaabka ahaa ee la toogtay ayaa katirsanaa garabka amniyaatka maleeshiyada u qaabilsan dilalka khaarajinta ah. Maxkamada ciidamada ayaa bishii lasoo dhaafay xubnaha ku xukuntay dil toogasho ah.
Waxay noqon tiradii ugu badnayd oo xubno Al-Shabaab ah oo hal mar lagu toogto gudaha Soomaaliya. Puntland oo marar hore oo badan toogasho ku fulisay xubno Al-Shabaab ah ayaa 13 xubnood toogatay sanadkii 2013.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo xiriir la leh urur weynaha Al-Qaacida ayaa kacdoonkeeda gudaha Soomaaliya bilowday sanadkii 2006.
Dowlada Bangladesh ayaa sheegtay in 20 qof lagu dilay weerar ay niman dablay ah ku qaadeen makhaayad caan ah oo kutaala caasimada Bangladesh, Dhaka. Nimanka hubaysan ayaa weerarka ku qaaday makhaayada Holey Artisan Bakery [...]